PressReader - Ilanga: 2017-09-11 - Intukuthelo kuhlekiswa ngamabele amabhokisa
Intukuthelo kuhlekiswa ngamabele amabhokisa
Kwale noma sezicelwa izikhulu zesilisa ukuba ziphume
Ilanga - 2017-09-11 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA
YINKULU intukuthelo ngokuhlukunyezwa nokwehliswa isithunzi kwamabhokisa esifazane okwenzeke ngesikhathi kuneKZN Elite Championships 2017 ngoNhlangulana (June) eMnambithi, maphakathi neKwaZulu-Natal.
Amabhokisa esifazane asesigabeni sama-amesha - aneminyaka ephakathi kweli-19-40 ubudala - athi kunezikhulu zesilisa ezale ukhasha ukuphuma egunjini abekhumulela kulona ngesikhathi ekalwa isisindo kule midlalo.
Kuthiwa kukhona nebezenza ihlaya ngamabele amabhokisa zithi ehlile. Amabhokisa athi bekulindeleke ukuba kuthi uma kumenyezelwa ukuthi sekukalwa abesifazane, kuphume bonke abesilisa - kuhlanganisa nazo lezi zikhulu.
Kuthiwa-ke kwale noma ecela amabhokisa ukuba izikhulu zesilisa ziphume ukuze akhumule ngokukhululeka - njengoba umthethosisekelo weSouth African National Amateur Boxing Organisation (Sanabo), uthi avumelekile ngisho ukuhamba nqunu ngesikhathi ekalwa uma esola ukuthi izingubo zangaphansi zinezela isisindo.
Agcine ekhumulile zikhona lezi zikhulu. UNokwanda Mbatha oyi- bhokisa elidabuka ngaphansi kukaMasipala wesiFunda iKing Cetshwayo, uthi babona becindezelekile bengamabhokisa esifazane ngenxa yalesi sigameko.
Ekhuluma naleli phephandaba, uthe kakwehli kahle ukuthi lolu daba abaluthatha njengolubucayi kangaka kalusukunyelwa njengoba kungakabikhona okwenzekayo kuze kube yimanje.
Lolu daba uthi uze walubika nakuBridget Bowers oyinhloko yeWomen’s Commission nakwezinye izikhulu ebezikhona emidlalweni ebiseMnambithi.
“Okuxaka kakhulu nokuphinde kungikhathaze, wukuthi lo mncintiswano ubuhlanganise abantu abakhulile, abanye banezingane abanye bashadile. Kuwukwehlisa isithunzi sabesifazane ukuthi ungaze ukhulume ngemizimba yabo ngalolu hlobo. Kukhombisa ukungabahloniphi nhlobo,” kusho yena.
Uthi yena uqobo uhlukunyeziwe njengoba esinye sezikhulu sikhulume ngomzimba wakhe saze sambuza ukuthi ugqoka usayizi bani ezingutsheni zangaphansi ngoba sifuna ukumthengela i-bikini.
ILANGA linobhalonyazi ( e-mail) olubhekiswe kuMnu Andile Mofu ongumengameli weSanabo mayelana nalolu daba. Kulolu bhalonyazi, uNokwanda ubalula ukukhumula kwamabhokisa esifazane phambi kwabantu besilisa - kuhlanganisa nezikhulu - athi kuwehlise isithunzi.
“Ngithe uma ngikhala ngokungakhululeki ngokukhumula phambi kwabantu besilisa, esinye isikhulu sangitshela ukuthi yinto ejwayelekile lena. Okunye okungehlanga kahle wukuthi kukhulunywe kabi ngamabele abesifazane kuthiwe ehlile,” kusho uNkz Mbatha obhalweninyazi.
“Ngikubikile lokhu kodwa ngatshelwa ukuthi mangingazikhathazi kakhulu ngoba lesi sikhulu vele singumuntu ohlala ezidlalela nje. Kusukela nini indaba yokuhlukunyezwa kuyindaba yokudlala?” kusho uNokwanda obhalweninyazi.
Uthi kunzima ukuba yibhokisa kodwa kunzima kakhulu uma ungelesifazane. Kakuyena kuphela uNokwanda okhala ngalokhu njengoba nabanye abashayi sibhakela bevumelane naye bethi bahlukumezeke kakhulu kwiKZN Elite Championships 2017 eMnambithi.
Elinye ibhokisa - elicele ukuba igama lalo lingadalulwa ngoba lesaba ukucwaswa kakhulu kunakuqala - lithi bahlukumezeke kakhulu kulo mncintiswano, kakhulukazi ngenxa yezinto ebezishiwo ngabesilisa.
“Sikhumule phambi kwabo bebukela, kunzima ngoba sitshelwa ukuthi kakukho esingakwenza,” kusho leli bhokisa. UNonceba Xaba uthi ube ngowokuqala ukukhumula phambi kwalaba besilisa kwazise kuthe noma sekumenyezeliwe ukuthi sekuzokalwa amabhokisa esifazane bazihlalela nje.
UMnu Ben Zikhali ongumqeqeshi wamanye ala mabhokisa, uthi amtshelile ngalesi simo.
“Ngiyazi nokuthi uNokwanda ubhale izincwadi ebika ngalolu daba kanti abathintekayo kabakaze bazihluphe ngokuxolisa. Ngeke ngizilahle izingane zami uma zihlukumezekile zaphathwa ngendlela okungeyona,” kusho yena. UMnu Mofu uthe ihhovisi lakhe liphezu kwalo lolu daba.
“Siyitholile incwadi yesikhalo, kuyimanje ummeli wenhlangano uxhumana nabo bonke abathintekayo,” kusho yena. ILANGA lithole ukuthi ne-Intenational Boxing Association (IBA) enekomkhulu eLaussane, eSwitzerland, nayo yazisiwe ngalolu daba. Leli phephandaba linalo ubhalonyazi lapho uLeila Zerouala oyi- senior legal manager kwi-IBA ucele ukuba bathunyelelwe yonke imininingwane ngalesi sikhalo ukuze bakwazi ukuqala olwabo uphenyo.
Okhulumela uMnyango wezeMidlalo nokuNgcebeleka, uMnu Mickey Modisane, ucele ukuthunyelelwa imibuzo ngobhalonyazi wathembisa ukuyiphendula ngoMgqibelo kodwa kuze kwashaya isikhathi sokuloba izimpendulo zingabonwa.
Ngithe uma ngikhala ngokungakhululeki ngokukhumula phambi kwabantu besilisa, esinye isikhulu sangitshela ukuthi yinto ejwayelekile lena. Okunye okungehlanga kahle wukuthi kukhulunywe...